Mayelana Nathi - i-Shangke Chemical
EKHAYA > MALUNGA US
Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd. yasungulwa kwi-2008, e-Fine Chemical Industrial Park yaseZhangpan Idolophu, iXuchang, iPhondo laseHenan, kunye ne-10 yezigidi zeemitha ezi-square, iimpahla ezipheleleyo ze-10 yezigidi ze-US, kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-100.
I-Shangke Chemical yinkampani ephakamileyo yezobuchwepheshe echanekileyo kuma-intermediate asebenzayo (APIs). Ukulawula umgangatho ngexesha lokuvelisa, inani elikhulu labaqeqeshi abanolwazi, izixhobo zokuvelisa iikholeji zokuqala kunye nama-laboratories ngamanqaku aphambili. Ngaphantsi kwemimiselo ye-ISO 9001: Inkqubo ye-2015 kunye nolawulo oluqinileyo, iimveliso eziphezulu zenza uncedo lwethu lwandiswe kwi-United States, eYurophu, eJapan nakwamanye amazwe, kumaziko ophando lwendawo nakwiinkampani zamachiza, kwaye sihlala sihlolisisa ithuba lokuncedisa abathengi abaninzi.
Ngengcamango yayo yokuvelisa izinto ezintsha kunye nokukhuseleka kokusingqongileyo, u-Shangke Chemical uzibophelele ekuphumezeni uxanduva lwayo kwezempilo yoluntu, kunye nombono "wokuvelisa izinto ezintsha kwezesayensi kunye nezobuchwepheshe, ukhuseleko lwendalo esingqongileyo, uthembekile kwaye uthembekile, kunye nophuhliso oluqhelekileyo", olunikezelwe ukubonelela abathengi ekhaya nakwamanye amazwe ngamaxabiso afanelekileyo, iimveliso ezisemgangathweni kunye Iinkonzo zobugcisa.
Abathengi bakwaMachke Chemical bandile benyuka baya eNyakatho Melika, eYurophu, eIndiya, kwaye sihlala sikhangela kwaye sisebenza nzima.
Iinkampani ezibambelela kumxholo "wokwenza isayensi kunye nobuchwephesha, ukukhusela indalo esingqongileyo eluhlaza, ukuthembeka nokuthembekile, kunye nophuhliso oluqhelekileyo", ezinikezelwe ukubonelela abathengi ekhaya nakwamanye amazwe ngamaxabiso afanelekileyo, iimveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobuchwephesha zobugcisa.
I-20 iminyaka yamava oshishino.
ISO9001: I-2000 kunye neCGMP Certification.
Imveliso isebenza kakuhle kakhulu kwaye inenzululwazi yamva nje
kunye nempumelelo yezobuchwephesha.
Iimveliso ezingabizi, Ukuncitshiswa kwamaxabiso akuyeki inkonzo.